Samaritana - Wikipedia
Ny Samaritana, izay atao hoe Israelita samaritana, dia vahoaka monina ao Israely sy Sisjordania, ka ao Samaria, tanàna ao amin'ny tapany avaratr'i Palestina, no tany nonenan'ireo razany izay nanjaka tao mandraka amin'ny taonjato faha-5. Tsy milaza ny tenany ho Jiosy izy ireo nefa mihevi-tena ho taranaky ny Israelita fahiny nonina tao amin'ny Fanjakan'i Israely tao avaratra tao Samaria. Misy ny Jiosy mihevitra azy ireo ho taranak'olona vahiny tsy Israelita. Na tamin'ny andro mifanandrify amin'ny zavatra tantaraina ao amin'ny Testamenta Vaovao dia navakavahan'ny Jiosy ny Samaritana. Ny Fanjakan'i Israely amin'izao fotoana izao anefa dia manao ny Samaritana ho Jiosy.
Samaritana mankalaza ny fetin'ny Tabernakely (na Sokota) eo amin'ny tendrombohitra Gerizima.
1 Ny olana momba ny fiavian'ny Samaritana
1.1 Araka ny Baiboly
1.2 Fiheveran' ny Jiosy sy ny Kristiana sasany
1.3 Fiheveran' ny manampahaizana
2 Ny fivavahan' ny Samaritana
2.1 Ny tendrombohitra Gerizima
2.2 Ny Baiboly samaritana
2.3 Ny fety
Ny olana momba ny fiavian'ny SamaritanaHanova
Araka ny Boky faharoan'ny Mpanjaka ao amin'ny Baiboly (2Mpanj. 17.23 --17.41) dia natao sesitany mankany amin'ny faritry ny Fanjakana asiriana ny mponin'i Samaria mba ho fanasazian' Andriamanitra ny fahotan'izy ireo. Avy eo dia tsy fantatra intsony ny nanjo azy fa nanjavona. Milaza ny Baiboly fa nisy mponina vahiny mampidirina tao Samaria mba hasolo ireo mponina izay natao sesitany. Ireo vahiny ireo hono no namorona ny fivavahana manafangaro fomba israelita amin'ny fomban'ny mpanompo sampy; ka niteraka ny Samaritana. Ny fivavahana samaritana araka ny ahafantarana azy amin'izao fotoana izao anefa dia tsy ahitana fomban'ny mpanompo sampy.
Misy hoatry ny mifanohitra ny fitantaran'ny Baiboly ao amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka: ireo mponina vao nampidirina ao amin'ny faritr'i Samaria ireo dia lazaina fa vahiny avy any ivelany, nefa voalaza koa fa nanao fanekem-pihavanana tamin'izy ireo i Iahveh, toy ny hoe taranaky ny Israelita taloha izy ireo. Etsy andaniny dia nisy ireo izay lazaina fa natahotra an'Andriamanitra, ary ankilany dia lazaina koa fa nanompo koa ny andriamaniny izy ireo.
Ny Baiboly anefa tsy tena miresaka mazava ny amin'ny fanjavonan'ireo fokon'i Israely folo. Ohatra, ny Bokin'i Jeremia (Jer. 41.5) dia mitatitra fa 150 taona taorian'ny faharavan'ny Fanjakan'i Samaria, izany hoe raha vantany vao rava i Jerosalema tamin'ny taona 586 tal. J.K., dia tonga nitondra fanatitra ho an'ny Tempolin'i Jerosalema ny mponin'i Israely Avaratra: "lehilahy miisa valopolo tonga avy any Sikema (na Sekema), avy any Silo ary avy any Samaria, niharatra volom-bava, nandrovitra akanjo, sady nandididy ny hodiny (ho mariky ny fisaonana). Nitondra voan-javatra sy emboka manitra hatao fanatitra ho an'ny Tempolin'i Iahveh".
Fiheveran' ny Jiosy sy ny Kristiana sasanyHanova
Na dia manalasala aza ny fitantaran' ny Baiboly dia mihevitra ny Jiosy ôrtôdôksa, toraka izany koa ny Kristiana sasany, fa ny Samaritana dia tsy afaka hihambo ho taranak' ireo foko folo tao Israely. Tsy ireo Samaritana ireo no ho fitohizam-pisian' ireo foko izay nanjavona amin' ny fomba tsy fantatra ireo; taranak' olona tsy Israelita tao amin' ny mpijirika Asiriana tamin' ny Andro Taloha.
Fiheveran' ny manampahaizanaHanova
Ny fivavahan'ny Samaritana, izay mifototra amin'ny Torah, dia tsy ahitana soritra fomban'ny mpanompo sampy. Tamin'ny taonjato faha-6 dia nitantara ny Bokin'i Jeremia fa nanao fanatitra tao amin'ny Tempoly izy ireo.
Ny soraratr'ireo raby tamin'ny fotoana nanombohan'ny fisian'ny fivavahana kristiana dia milaza fa ny fanompoan'ny Samaritana an'Andriamanitra tokana dia efa nisy hatramin'ny andro taloha ela. Ny fanangonam-pitsipika 'Houllin dia manaiky ny henam-biby novonoin'izy ireo ho kasher (כשר), izany hoe azon'ny Jiosy hanina, raha nisy Jiosy nanatrika ny famonoana izany, ary ny boky atao hoe Orlah ao amin'ny Talmodan'i Jerosalema dia manaiky koa ny mofo nandrahoin'izy ireo nefa misy fapetra izany. Misy soratra hafa ao amin'ny Talmodan'i Jerosalema nosoratana tokony ho tamin'ny taonjato voalohany izay milaza fa ny sakafon'ny Samaritana dia ara-dalàna. Ny soratra iray hafa koa, ny Massecheth Kuthim, dia manamafy ny fanekena amin'ny ampahany azy ireo: "oviana no azo ekena ho isan'ny vahoaka jiosy izy ireo? Rehefa miala amin'ny tendrombohitra Garizima izy ireo sady manaiky an'i Jerosalema sy ny fitsangan'ny tena amin'ny maty". Io soratra io ihany dia miaiky fa ny ankabeazan'ny fanaon'ny Samaritana dia itovizan'izy ireo amin'ny Israelita.
Noho ireo antony ireo dia be mpanaraka ny petra-kevitra izay manohana fa ny 80%n'ny mponina tao amin'ny Fanjakan'i Samaria dia nanohy noina tao ihany fa tsy natao sesitany, ka ireo no nanjary Samaritana (amin'ny dikan'io teny io ara-pivavahana) araka ny ambaran'ny Bokin'ny Mpanjaka. Ireo izay natao sesitany nefa vitsy dia mety nifangaro amin'ny vahoaka manodidina rehefa ela ny ela.
Ny fivavahan' ny SamaritanaHanova
Ny fivavahan' ny Samaritana dia mifanakaiky amin' ny fivavahana jiosy, nefa ny boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly ihany no ekeny ho Soratra Masina.
Ny tendrombohitra GerizimaHanova
Ny tendrombohitra Gerizima no tendrombohitra masina fa tsy i Ziona na Siona.
Tany amin' ny taona 330 tal. J.K. ny vahoaka samaritana dia nanorina tempoly teo an-tampon' ny tendrombohitra Gezirima izay nanjary foibentoeran' ny fivavahana samaritana. Noravan' ilay mpanjaka hasmoneana atao hoe Joany Hirkana I io tempoly io tamin' ny taona 108 tal. J.K. Ny emperora Zeno, izay nanjaka hatramin' ny taona 474 ka hatramin' ny 491 dia nanenjika ny Jiosy sy ny Samaritana sady nandrodana ny tempoly samaritana (fanidroany izany) izay tsy voaorina intsony. Na dia noravana aza ny tempolin' ny Samaritana dia nijanona ho foiben' ny fivavahana samaritana ny tendrombohitra Garizima hatramin' izao.
Ny Baiboly samaritana na Torah samaritana na Pentateoka samaritana dia ny soratra masin' ny fivavahana samaritana izay tsy ahitana boky hafa ao amin' ny Baiboly jiosy (Tanakh) afa-tsy ny Lalàna (Torah) na ny Pentateoka. Voasoratra amin' ny fiteny hebreo samaritana sy amin' ny abidy samaritana izany Baiboly izany.
Misy fahasamihafana ny votoatin' ny Torah hebreo amin' ny Torah samaritana. Ny lehibe indrindra amin' ireo dia ny fiheverany fa tsy i Jerosalema fa ny tendrombohitra Garizima no toerana masina. Ny ny didy faha-10 ao amin' ny Didy folon' ny Torah samaritana dia ahitana ny fanajana an' i Garizima ho ivon-toeran' ny fanompoam-pivavahana.
Ny fety samaritana lehibe indrindra dia ny fetin' ny Paska. Tsy mitovy amin' ny Jiosy izay tsy manatanteraka intsony ny soron' ny zanakondrin' ny Paska ny Samaritana fa mbola manao izany iray andro mialoha ny Paska eo amin' ny tendrombohitra Garizima. Ao koa ny fivahiniana masina izay tanterahina intelo isan-taona eo amin' ny tendrombohitra Garizima.
↑ Fampianarana ao amin'ny Talmoda 'Hullin, 3b.
↑ Talmodan'i Jerosalema, Orlah, ii. 7.
↑ Talmodan'i Jerosalema, Abhodah Zorah v. 4
↑ "Massecheth Kuthim", Kirchheim, Septem Libri parvi Talmudici, pp. 31-36.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Samaritana&oldid=1037444"
Dernière modification le 5 Septambra 2021, à 18:17
Voaova farany tamin'ny 5 Septambra 2021 amin'ny 18:17 ity pejy ity.